बंगलादेशमा आतंकवादी आक्रमण, ४० जना विदेशी बन्धक
काठमाडौं, असार १८ । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आतंकवादी आक्रमण भएको छ । आतंकवादीहरुले केही मानिसलाई बन्धकसमेत बनाएका छन् ।
घाँटी रेटेर हिन्दु पुजारीको हत्या
ढाका, असार १७ । बंगलादेशमा एक हिन्दू पूजारीको हत्या भएको छ । बिहानको पूजा गर्ने तयारीमा रहेका पूजारीको घाँटी रेटेर हत्या भएको हो ।
काबुलमा फेरि आत्मघाती विस्फोट, कम्तिमा ३० जना मारिए
काठमाडौं, असार १६ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबानले गराएको आत्मघाती विस्फोटमा परी कम्तिमा ३० जना मारिएका छन् । मारिनेमा प्रहरीका क्याडेट र सर्वसाधरण रहेको स्थानीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
टर्कीको विमानस्थलमा मारिएका ट्युनिसियाली नै हुन् आक्रमणकारी ?
ट्युनिस, असार १६ । टर्कीको विमानस्थलमा बुधबार भएको आतंककारी आक्रमणमा मारिएका एकजना ट्युनिसियालीलाई टर्कीको उक्त आक्रमणको दोषीकारुपमा आशंका गरिएको छ । मारिने ती व्यक्ति पटक–पटक टर्की गएको खुलेको छ । उनी गएका केही महिनायता पटक–पटक टर्की पुगेको देखिएको हो ।
को होला अब बेलायतको प्रधानमन्त्री ?
काठमाडौं, असार १६ । बेलायतका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले राजीनामा दिने घोषणा गरेपछी भावी प्रधानमन्त्रीका लागि बिभिन्न नेताहरुले आ आफनो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।
इजिप्ट एयरको विमानभित्र धुँवा देखिएको पुष्टि, अनुसन्धान जारी
काठमाडौं, असार १६ । भूमध्य सागरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको इजिप्ट एयरको विमानभित्र धुँवा देखिएको पुष्टि भएको छ ।
अमेरिकी कारवाहीमा २५० भन्दा बढी आइएस लडाकु मारिए
बग्दाद, असार १६ । इराकको फलुजा सहरमा अमेरिकी हवाई हमलामा २५० भन्दा बढी आइएस लडाकु मारिएका छन् ।
इस्तानबुलको विमानस्थलमा विस्फोट, ४१ जना मारिए, कसरी भयो आक्रमण ? (फोटोफिचर)
काठमाडौं, असार १५ । टर्कीको इस्तानबुलस्थित अटाटुर्क विमानस्थलमा बुधबार बिहान आत्मघाती बम आक्रमण र अन्धाधुन्ध गोली प्रहारबाट कम्तिमा ४१ जना मारिएका छन् । युरोपको सबैभन्दा व्यस्तमध्ये एक यो विमानस्थलमा ट्याक्सीमा आएका तीनजना आक्रमणकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा र बम विस्फोट गराउँदा उनीहरुको मारिएका हुन् ।
सगरमाथा चढेर ‘कीर्तिमान’ बनाएका भारतीय दम्पतीको आरोहण नै विवादमा
काठमाडौं, असार १५ । भारतका तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो दम्पतीको कीर्तिमान राखेका एक जोडीको आरोहण दाबी विवादमा परेपछि प्रहरीले छानबिन सुरु गरेको छ । दिनेश र ताराकेश्वरी राठौर दम्पतीले गत मे २३ तारिखमा सगरमाथाको शिखरमा पुगेको बताएका थिए ।
दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापानद्धारा पहिलोपटक संयुक्त मिसाइल अभ्यास
काठमाडौं, असार १५ । दक्षिण कोरिया, अमेरिका र जापानले पहिलोपटक संयुक्तरुपमा मिसाइल अभ्यास गरेका छन् । अमेरिकाको हवाई राज्यको समुद्रमा यो अभ्यास गरिएको हो । अभ्यासकाक्रममा कुनैपनि मिसाइलको प्रहार नभएपनि ब्यालेष्टिक मिसाइल रक्षात्मक प्रणालीको परीक्षण गरिएको बताइएको छ ।
टेक्सासमा दुई रेल आपसमा ठोक्किए, दुर्घटनालगत्तै भीषण आगलागी
टेक्सास, असार १५ । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा दुई रेल आपसमा ठोक्किएर भीषण आगलागी भएको छ ।